Fitsirihana ny “logiciel”: fanambin’ny Ceni ny fahatokisan’ny besinimaro | NewsMada
Fitsirihana ny “logiciel”: fanambin’ny Ceni ny fahatokisan’ny besinimaro
“Mba hahazoana ny fahatokisan’ny besinimaro izay zava-dehibe eo amin’ny fitantanana ny fifidianana. Izay no anton’ny anaovana ny fitsirihana ny “logiciel”. Mba hoe hifanatrehana izany, ary avela hikirakira ilay “logiciel” ireo solontenan’ny kandidà.”
Io ny fanazavan’ny filohan’ny Ceni, Rakotomanana Hery, teny Nanisana, afakomaly, ny fitsirihana ny “logiciel” ampiasain’ny Ceni amin’ny fikirakirana voka-pifidianana. Hiaraha-mijery amin’ny tomponandraikitra ao amin’ny Ceni izany, fa tsy misy olana io “logiciel” io: mangarahara, tsy misy azo kianina fa mandeha araka ny tokony ho izy.
Ny marina, tsy misy olana ny “logiciel”. Saika iray ihany ny voka-pifidianana navoakan’ny Ceni sy izay navoakan’ny Fitsarana avo momba lalàmpanorenana (HCC). Nefa “logiciel” roa samy hafa no nampiasaina. Ny dikan’izany, tsy misy olana ny “logiciel” ampiasain’ny Ceni. Toy izany koa ny ampiasain’ny HCC. Mamoaka vokatra iray ihany ireo.
Mety misy ny lesoka, saingy…
“Mety misy lesoka etsy sy eroa. Fa raha ny fangaraharana sy ny fahitsiana ary ny fahamarinana, tsy afa-kilaza na inona na inona aminay ny olon-drehetra”, hoy izy. Noho ny toromariky ny HCC no anaovana ny fitsirihana mandritra ny roa andro ny “logiciel”. Hampahafantarina anio ny vokatr’izany, raha misy na tsia ny olana.
“Fahadiovana sy fangaraharana ary fahitsiana tanteraka no hitantanantsika ny fifidianana. Satria mahita izahay mpitantana ny Ceni fa efa reraka dia reraka ny firenena malagasy. Tsy izao intsony ny fotoana anodinkodinana fifidianana”, hoy ihany izy.
Manatrika ny fitsirihana atao ny manampahaizana avy amin’ny fiombonambe iraisam-pirenena, ny teknisianina avy amin’ny firaisamonina sivily, ny avy amin’ny kandidà roa, ny avy amin’ny HCC.